KEDU ESI EME FOTO NA FOTO PHOTOSHOP - PHOTOSHOP - 2019
Mepụta eserese site na foto dị na Photoshop
Ịnyefe ego n'agbata mgbokọta nke usoro ịkwụ ụgwọ dị iche iche na-akpata nsogbu ndị ọrụ. Nke a na-eme mgbe ị na-ebufe si WebMoney gaa Yandex Wallet.
Ịnyefe ego site WebMoney ka Yandex.Money
Ị nwere ike ịnyefe ego n'etiti usoro ịkwụ ụgwọ ndị a n'ọtụtụ ụzọ. Ọ bụrụ naanị na ị chọrọ ịkwụsị ego gị na obere akpa WebMoney, zoo aka n'isiokwu na-esonụ:
Gụkwuo: Anyị na-ewepu ego na WebMoney system
Usoro 1: Akaụntụ Aka
Ụzọ kachasị mfe bụ ịnyefe ego n'etiti aka gị nke usoro dị iche iche site na ijikọ akaụntụ ahụ. Iji mee nke a, ịkwesịrị ịnweta usoro abụọ ma mee ihe ndị a:
Nzọụkwụ 1: Ijikọ akaụntụ
A na-arụ ọrụ mbụ na webMoney saịtị. Meghee ma soro usoro ndị a:
WebMoney ukara website
Banye na akaụntụ nkeonwe gị na na ndepụta nke wallets pịa bọtịnụ ahụ "Tinye akaụntụ".
Nchịkọta ga-enwe mpaghara "Gbakwunye obere akpa eletrik na usoro ndị ọzọ". Debe ya na kọntaktị na họrọ na listi na-egosi Yandex.Money.
Na ibe ọhụrụ, họta ihe ọzọ. Yandex.Moneydị na ngalaba "Wallets Electronic nke usoro dị iche iche".
Na windo ohuru, tinye nọmba Yandex Pịa ma pịa "Nọgidenụ n'ihu".
Ozi na egosiputa na ederede banyere mmalite nke ihe itinye aka. Ọ nwekwara koodu ịbanye na Yandex.Money peeji nke na njikọ na usoro onwe ya.
Iso njikọ ahụ, chọta akara ngosi ahụ n'elu ihuenyo ahụ, na ịchọta banyere ego dịnụ, wee pịa ya.
Ozi ga-apụta na window ọhụrụ banyere mmalite nke ịkọkọ akaụntụ ahụ. Pịa na "Kwenye Ịtụkwasị" iji mezue.
N'ikpeazụ, ị ga-achọ itinye koodu site na WebMoney peeji nke ma pịa "Nọgidenụ n'ihu". Mgbe nkeji ole na ole, usoro ahụ agwụla.
Nzọụkwụ 2: Nnyefe ego
Mgbe ịmechara nzọụkwụ mbụ, laghachi na WebMoney peeji nke ma mee ihe ndị a:
Yandex.Wallet ga-apụta na ndepụta nke wallets dị. Pịa na akara ngosi ya ka ị gaa n'ihu.
Pịa bọtịnụ ahụ "Si n'elu obere akpa gị" ịmalite ịnyefe ego.
Tinye ego achọrọ ma pịa "OK".
Mpempe akwụkwọ ahụ egosipụtara ga-enwe ozi gbasara ego na ntụziaka nke mbufe. Pịa "N'elu elu" na-aga n'ihu.
Họrọ usoro nkwenye ma pịa bọtịnụ ahụ. "OK". Mgbe agafe nkwenye nke usoro ego ahọrọ a ga-agafe.
Usoro nke 2: Ịkwụnye ego
Ọ bụrụ na achọrọ ịnyefe na akpa nke onye ọzọ maọbụ na ọ gaghị ekwe omume ijikọ akaụntụ ahụ, ịnwere ike iji ọrụ nke ego Exchange Exchange. Iji jiri nhọrọ a, ọ ga-ezuru inwe obere akpa WebMoney na obere akpa akpa Yandex maka ịnyefe.
Onyenye ego ahia nke ndi isi
Soro njikọ ahụ n'elu saịtị nke ọrụ ahụ ma họrọ ihe dị na listi ahụ. "Emoney.Exchanger".
Ohu ohuru nwere ihe omuma banyere oru nile di njikere. Ebe ọ bụ na a ga-ere WMR (ma ọ bụ ego ndị ọzọ) a ga - erere ndepụta na iwu maka ire ere.
Lee nhọrọ dịnụ. Ọ bụrụ na ọ bụghị, pịa bọtịnụ ahụ. "Mepụta ngwa ọhụrụ".
Dejupụta n'ụdị isi na ụdị edemede. Ọtụtụ ihe ma e wezụga "Ego ole ka ị nwere" ma "Ego ole ka ị chọrọ" ga-ejupụta na-akpaghị aka dabere na ozi gbasara akaụntụ WebMoney gị. Tinyekwa nọmba obere akpa Yandex.
Mgbe i juputara ozi ahu, pịa "Tinye Ugbu a"ime ka ọ na-arụsi ọrụ ike maka onye ọ bụla. Ozugbo e nwere onye nwere mmasị na onyinye a, a ga-egbu ọrụ ahụ.
Usoro ndị a kọwara ga-enyere aka ịmekọrịta ego n'etiti usoro abụọ ahụ a kpọtụrụ aha, mana nke abụọ na-ewe oge iji mechaa, nke a ga-atụle ma ọ bụrụ na ọrụ dị ngwa.